तयार हुनुहुन्छ ! भोलिबाट खुल्दैछ हालसम्मकै ठूलो आईपीओमा आवेदन, कति कित्तासम्म भर्ने ? – Aarthik Samachar
तयार हुनुहुन्छ ! भोलिबाट खुल्दैछ हालसम्मकै ठूलो आईपीओमा आवेदन, कति कित्तासम्म भर्ने ?
By आर्थिक समाचार	 On Jan 14, 2021
हालसम्मकै ठूलो नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेडको आईपीओ भोलि माघ २ गतेदेखि निश्कासन हुने भएको छ।
सेयर निष्कासनकर्ता तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलका अनुसार नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेडका ८ करोड कित्ता आईपीओ भोलि शुक्रबारदेखि निष्कासन हुने भएको हो। यो आईपीओमा छिटोमा माघ ६ गते र ढिलोमा माघ १६ गतेसम्म आवेदन दिन मिल्नेछ।
कुल ८ करोड कित्तामध्ये ०।२ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख कित्ता म्युचुअल फण्डहरुका लागि आरक्षण छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणका लागि भने ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता छुट्याइएको छ।
प्रतिकित्ता रु। १०० का दरले आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ करोड कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटलले जनाएको छ।